RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha Janaayo ee Kooxda Manchester United oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(Manchester) 01 Feb 2020. Waxaa la shaaciyey ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha Janaayo ee kooxda Manchester United.
Fred ayaa loo dooratay xiddigii ugu wnaagsanaa kooxda Man United bishii la soo dhaafay ee Janaayo ee bilawga sanadkan 2020, kaddib markii uu ku garaacay hanashada abaal-marintan saddex ka mid ah saaxiibadiisa kooxda.
Ninka reer Brazil ayaa abaal-marintaan ku garaacay kabtanka koowaad ee kooxda Harry Maguire & waaya-aragga naadiga Matic, taasi oo muujineysa sida uu Fred u qabtay shaqo adag.
Si guud, waxaa abaal-marintaan u tartamayay xiddigo badan sida Nemanja Matic, Harry Maguire iyo Brandon Williams, laakiin lambarka 17-aad kooxda Fred ayaa ku dhammeystay booska ugu sarreeya.
Fred ayaa ciyaaray dhammaan sagaalkii ciyaarood ee Janaayo ay dheeshay Man United , isagoo lagu soo bilaabay toddobo ka mid ah, waxaana uu muujiyay sida uu muhiim ugu yahay kooxda Ole Gunnar Solskjaer tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka.
Wuxuu sidoo kale diiwaan galiyay kulankiisii 50-aad ee Man United intii lagu jiray bishii koowaad ee sanadkan, guushii 4-0 ee ay ka gaareen Norwich City ee ka dhacday garoonka Old Trafford.
Yeelkeede, Paul Pogba iyo Scott McTominay ay ka maqnaa bisha Janaayo oo dhan Kooxda Manchester United , laakiin Fred ayaa si cad u muujiyay awood dheeri ah bishii dhammaatay si uu u daboolo dul-duleellada khadka dhexe ee kooxda.
🇧🇷 F R E D 🏆#MUFC‘s no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial 👏 pic.twitter.com/WFkHwZdzlq
Shaxda rasmiga ah kulanka Man Utd Iyo Wolverhampton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay